crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Baxaalliga Fiidmeerta! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Deegaankeenna August 6, 2015	0 665 Views
Muqdisho – Fiidmeertu ama Kobolligu waa noole aad naaxi ah. Waxaa laga mid dhigaa Naas-leeyda hadana shimbiraha ayay la muuqaal tahay. Waxay leedahay baalal—wayna ku duuli kartaa. Dhego aad u guud balbalaaran iyo fool u eg midka Jiirka ama Doolliga ayaa siisay humaag lagu dheygago. Baalasheeda waxay ka sameysan yihiin harag-weyd aad u jilcan; mana lahan dufta ama dhogorta shimbiraha oo kale. Hayeeshe, inta kale ee gibilkeeda waxaa ku dadan suuf aad u nugul kaas oo midab ahaan qahwi, madow marba mid noqda.
Badi fiidmeertu waxay cuntaa cayayaanka. Qaarkeed waxay kaloo cunaan miraha, fuf-magoolka caleemaha iyo manka ubaxa ee Shinnidu malabka ka sameyso. Waxaa kale oo jira Fiidmeerro waaweyn oo layiraahdo Vampire. Waxayna ku dul-nool yihiin dhiigga naasleeyda qaar iyo shimbiraha. Saacad gudaheed, waxay cuni kartaa 1,200 oo Kaneeco ah. Waxay wax ku cuni karaan gudcur ama mugdiga dhexdiisa. Waxay xawaareyn karaan 60 mile saacadiiba.
Guud ahaan, Fiidmeertu way jiiftaa maalintii oo dhan wayna gabraarataa habeenkii. Tani aad ayay waxtar ugu noqotay waayo badi nooluhu waa kuwa hurda xilliga saqda-dhexe mirashada ee Fiidmeerta. Taasna waxay ku caawisay inay si fudud u qabsato wixii ay rabto.
Waxay badi ku nooshahay goob si hufan loo hagoogay; meel aad looga dheeraaday sida bohollada godadka ee gunta hoose ku yaal iyo doldaloollada qolalka ee guriga. Kuwo ayaa ku dul nool geedaha. Lamid ma ahan noolaha kale, Fiidmeertu waxay jiifsataa ama nasataa iyadoo madaxeedu uu dhulka raaraco ama fooraro.
Cilmi-baarayaasha noolaha aad bay ugu adkaatay inay Fiidmeerta u kala dhanbalaan laba dhinac. Waayo Fiidmeertu waxay leedahay astaamihii naasleyda nuujisa iyo baxaalliga san-saannimo ee Haadda “shimbiraha” labadaba.
Fiidmeertu waxay heshaa dhiiggaa caadada ah ee bishiiba mar dhedigta Bani’aadmiga ku dhaca. Sanadkiiba hal bay dhashaa. Taas oo ka dhigaysa in taranteeda sii tirmayso. Waxay hooyooyinka Fiidmeerta carruurta ka dhex heli kartaa kumaakun kale oo Kobolliyo ah – iyada oo codad u gaar ah ugu dhawaaqaysa.
Cimrigeedu wuxuu gaari karaa ku dhawaad 30 sanadood.
Previous: Damiirku ha shaqeeyo!!
Next: Baxaalliga Maroodiga!!